သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို -> ကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ: LWX2T/LWX6T，LWX1T，LWX3T/LWX4T，LWX5T，LWX25 IEU
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်စ​​က်အပ် : DVX1，DVX57，DVX59，
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : LWX2T/LWX6T，LWX1T，LWX3T/LWX4T，LWX5T，LWX25 IEU
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုစက်အပ်နဖားကို : TVX1，TVX5，TVX7，TVX64，
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ် : UOX113GS，UOX163GAS
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ် : UY180GVS
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အကောင်းဆုံးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : 292B
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ် : 8158
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အိမ်တွင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို : MERROW10S
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်စ​​က်အပိုပစ္စည်း : HAX1
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကူးသန်းရောင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို : PVX7
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ် : PYA-4
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ကို အပ်နဖားကို : PYSX1 ER
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ် : SGX1906，SGX1963，SGX1965
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချည်အပ်ချုပ်စ​​က်အပ် : DYX3，DYX3 FR
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အရည်အသွေးပြည့်မီအပ်နဖားကို : SMX1014B
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ် : SPE193
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်စ​​က်အပ် : DCX27
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်စ​​က်အပိုပစ္စည်း : DHX1
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုခွန်အားအပ်နဖားကို : DMX3，DMX13
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ကိုအပ်ကို : CPX1，CPX5，CPX12
Curved Sewing Needles | Gebogene Nähnadeln | Изогнутые Швейные иглы | Agulhas de costura Curvo | Aghi per cucire curve | घुमावदार सिलाई सुई | Agujas para Maquinas de Tejer Industriales | إبر الخياطة المنحنية | kim khâu | เข็มเย็บโค้ง | Jarum jahit melengkung | বাঁকা সেলাই সূঁচ | Kavisli Dikiş İğneleri | ម្ជុល​កោង​ដេរ | ကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို